စိတ်နာ လို့ ပြိတ္တာ မဖြစ်စေနဲ့ ~ Myo Chit Myanmar
(တကယ်လဲ မချမ်းသာတော့ အဲ့လိုပြောခံရတာ အဆဲခံရသလိုပါဘဲ)
ခုကတော့ ကိုယ့်အမေရင်းလို လေးစားတဲ့ အမေစု ကို ဒီရံပုံငွေ ပွဲကိစ္စလေးတွေနဲ့ ပါတ်သက်ပြီး တစ်ခါထဲ သူတစ်သက်လုံးက အနစ်နာခံခဲ့တာတွေကို အတိတ်မေ့သွားသလို အားမနာလျှာမကျိုး ဝေဖန်စော်ကားနေလိုက်ကြတာဆိုတာ ...
(အာနဲ့ဘဲ တိုက်နေတာပါ၊ လေသေနတ် အစစ်တောင် ဝယ်မပစ်ကြပါ)
(တက္ကသိုလ်က စာပေးစာယူ မဟုတ်ပါ၊ Gmail နဲ့ FaceBook မှာ စာတွေ လိုက်ဖွနေခြင်း)
ဒါပေမယ့် အစိုးရကိုကြောက်လို့ မငြင်းရဲလို့ ခိုင်းရင်လုပ်ပေးရတာ လိုက်လျောရတာ မငြင်းဆန်နိုင် မငြင်းဆန်ရဲတာကို ဘယ်ပြည်သူအချင်းချင်းမှ အပြစ်မမြင်ကြ မဝေဖန်ကြပေမယ့် ..
သူတို့တွေလိုဘဲကြောက်လို့ မငြင်းဆန်နိုင်လို့ တစ်ခုခု မလွှဲမရှောင်သာ လုပ်ပေးရရင် အမြဲတမ်း မညှာမတာ ပြစ်ပြစ်နှစ်နှစ် အဆဲခံရတာ ကျွန်တော်တို့ အနုပညာလောကသားတွေပါ။
သူ့ကျွန်မခံပြီ ၃ ခါ တက်အော်သွားတဲ့ ဦးညွန့်ဝင်းလိုလူတွေ နဲ့ ခုချိန်ထိရှိနေတဲ့ သာယာစားတစ်ချို့ကြောင့် အနုပညာသမားတွေအားလုံးကို သိမ်းကျုံးပြီး စော်ကားတော့မယ်ဆိုရင် သေတဲ့အထိ အစိုးရကိုရော ပြန်ကြားရေးမကလို့ ဘယ်ဝန်ကြီးကိုမှပါ ဘာကြောင့်မှ မဖားခဲ့တဲ့ ဦးမညွတ်ခဲ့တဲ့
ကျွန်တော့် အဖိုးအဖွား အဖေအမေ ဦးလေးအဒေါ် တွေ ညီအစ်ကို မောင်နှမ ဒါရိုက်တာတွေ သရုပ်ဆောင်တွေ နဲ့ ရုပ်ရှင် ဂီတ စာပေ သဘင် အနုပညာသမား စစ်စစ်တွေလဲ ရှိနေပါသေးတယ်ဆိုတာကို သတိရပေးကြပါလို့ ... အလေးအနက်ထားပြီး မေတ္တာရပ်ခံပါရစေ။
အလှူရှင်ရဲ့ စစ်မှန်တဲ့ သဒ္ဓါတရား
လှူဒါန်းနိုင်တဲ့ ကံ သို့မဟုတ် အခွင့်အရေး
အလှူခံတဲ့သူရဲ့ ဝမ်းမြောက်ပီတိ နဲ့ အသိအမှတ်ပြု လက်ခံရယူမှု ဆိုတဲ့ သုံးမျိုး ပေါင်းစပ်တိုက်ဆိုင်မှ အထမြောက်တဲ့အရာပါ။
ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ရဲ့ အဆိုအမိန့်အရ ..
ဒါကြောင့် သူတစ်ပါးရဲ့ အလှူဒါနကို
ကဲ့ရဲ့ငြိုငြင် ပြစ်တင်ဝေဖန် ပြစ်မှားနှောက်ယှက် ဖျက်ဆီးဟန့်တား ပိတ်ပင်တားမြစ် ခြင်းတို့ကို
ကာယကံ ဝစီကံ မနောကံ တည်းယူသော ကံသုံးပါးလုံးနဲ့
ပြန် Share တာဟာလဲ သူများစကား (စာ) ကို စိတ်ထဲကဖတ်ကြား ပြီး သဘောတူလို့ မနောကံ မြောက်သွားတော့မှ သူများကို ဝစီကံ မြောက် စာနဲ့ လက်ဆင့်ကမ်း ပြန်ပြောဖို့ ကာယကံမြောက် SHARE ဆိုတာ / FORWARD ဆိုတာ ကို နှိပ်ရတာ မို့ ကံသုံးပါးလုံး မြောက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
(LIKE) လုပ်တာဟာလဲ တူတူပါဘဲနော် ကပ်မေးကြမှာသိလို့ပါ။
ဘယ်သူ့ကို ဘာကြောင့်ဘဲ ဖြစ်စေ ..
မကျေနပ်လို့ နာကျည်းနေလို့ စိတ်နာမိနေတာတစ်ချက်ထဲနဲ့ ၄င်းတို့ ပြုလုပ်လတ္တံ့ ပြုလုပ်ဆဲ ပြုလုပ်ပြီးခဲ့သော ကောင်းမှုကုသိုလ်ဆိုတာတွေကို အကြောင်းသုံးပါး ကိုက်ညီခြင်း ရှိမှန်းမရှိမှန်း သေသေချာချာမသိဘဲ အထင်နဲ့ ခံစားမှု ကိုဘဲ အခြေခံပြီး ကံသုံးပါးနဲ့ စော်ကားမိခဲ့ရင် သေလွန်တဲ့အခါ ပြိတ္တာ ဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတာလေးကို ...
Very good and open some of the eyes which we may have neglected.
၀င်လာရင်းကြုံလို့ ဖတ်သွားပါတယ်။ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းနဲ့ ရှင်းနေအောင်ရေးထားတာ သိပ်ကောင်းပါတယ်။ လူဖြောင့်စိတ်တိုထင်ပါရဲ့